Ubhiya ngenye yeziphuzo eiphuzwa kakhulu emhlabeni wonke. Abaningi bangavumelani ukuthi akukho lutho olungcono kunokuqhaqhaza ukuvula umkhuhlane ekupheleni kosuku olude. Kunezindlela eziningi zokwenza ubhiya. Ibhali, izinhlanzi kanye nemvubelo zihlangene ngezindlela ezehlukene zokwenza ubhiya kuzo zonke izintandokazi nezintandokazi.
I-Microbreweries kanye nezobuciko bezinyosi zakamuva zifika phambili ekubheni ubhiya eNingizimu Afrika. I-SouthAfrica.co.za ikuhamba ngendlela yokwenza ubhiya, ekukhuleni izitshalo zakho zokutshala ukuphuza okuqabulayo okuphelele.
Uhobhane yizimbali ezomile zomvini we-Humulus lupulus, kusukela emndenini owodwa wesitshalo njenge-Cannabis....more
Abantu baseNingizimu Afrika bathanda ubhiya omuhle futhi ukuthandwa kwebhiya yokukhwabanisa kuphakama ngezinhlobo eziningi zobhiya bezokwelapha ezisebenzayo nabantu abavamile abenza ubhiya ekhaya....more
Esikhathini esithile ngemuva kokutshala ama-rhizomes akho e-hop, amabhilidi azovela emhlabathini....more